Ọ bụ? Ọ nwere ike ịbụ? APUI mbu bu ebe a ... | Martech Zone
Ọ bụ? Ọ nwere ike ịbụ? APUI mbu bu ebe a…
Tọzdee, Febụwarị 8, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
The APUI (Ngwa mmemme onye eji eme ihe) nwere ike ịdị ebe a. Enweela m anya na Yahoo! Ọkpọkọ, injin ebe ndị ọrụ nwere ike ịza ma gbanwee RSS nri.
Otú ọ dị, nke a bụ mmalite, ọ ga-atọ ụtọ ile. Ekwuru m banyere mkpa ọ dị maka nke a technology mbubreyo gara aga na buru amụma na 2007 ga-abụ afọ nke GUI mmekọrịta mwekota na ekwenyere m na nke a bụ afọ nkwụsị.
Ọ bụrụ na Yahoo! Enwere ike iji paịji jikwaa RSS, ọ bụ obere usoro iji si na RSS gaa na ndị ọzọ XML API na Ọrụ Weebụ. Ekwenyesiri m ike na ihu ndị a ga-abụ nke siri ike na afọ ndị na - abịanụ na mkpa ndị mmepe nwere ike ịmalite.
A ka nwere ọtụtụ ọrụ ị ga - eme… mana nke a nwere ike ịgbanwe web yana n'ezie were ngwa ụlọ na ọkwa ọzọ. Usoro mmemme ngwa ngwa ga-atụgharị site na izu, ruo awa, na nkeji iji gbanwee data, nyocha ya, ma kpalite ihe omume dabere na ya. Cheedị ka ịnọdụ ala dị ka onye na-ere ahịa yana naanị 'na - asọpụta' na mkpọsa gị na-esote… enweghị ederede ederede, enweghị ụgwọ ngwanrọ, enweghị ndị mmepe, enweghị ọrụ na-emefu ego na mbubreyo.
Nke a bụ amụma m ọzọ… mkpa ndị mmepe sọftụwia ga-aga n'ihu ibili n'afọ ole na ole sochirinụ, ikekwe n'ime afọ iri na-abịanụ; Agbanyeghị, mgbe nke ahụ gasịrị, mkpa maka ndị mmepe ga - amalite iju ka ndị folks na - eji APUI nke ụlọ ọrụ iji wee rụpụta sọftụwia ha, usoro ọrụ ha, mmekọrịta ha na nhazi data ha.
Nke a bụ ihe ọ excitingụ!
Na-akwado blọọgụ iji bulie saịtị gị n'ọkwá
Feb 10, 2007 n’elekere 1:01 nke abali
Echiche dị mkpirikpi bụ na o yiri nke ahụ otu Demicron's Wirefusion si enyere ngwa Java aka…
Dobe na "modul" jikọta ya na ndị ọzọ, kọwaa oke ma bipụta.
M nnọọ ka ya bụrụ na Demicron ga-apụta na a Wirefusion “lite” na ama esịn ụfọdụ nke 3d nkwado na ụba ụfọdụ nke 2d oyiyi mkpachapụ… ma nke ahụ bụ maka a dị iche iche post.
Feb 10, 2007 n’elekere 10:57 nke abali
Anyị na-abịa ebe ahụ! Echetara m tinye n'ọrụ Ngwọta Sagent afọ ole na ole gara aga na ọ bụ ETL GUI nke dere atụmatụ XML. Ha ọkara ụzọ ebe ahụ, na-adọkpụpụta ịdọrọ na dobe arụmọrụ. Anyị nwere ike ide atụmatụ n'ime ọtụtụ awa kama izu. Anọ m na-eche ka mmadụ 'webify' nke a oge ụfọdụ.
Site na ọbịbịa nke Ọrụ Weebụ, o juru m anya na ọ nweghị onye wuru GUI ka ọ gụọ WSDL nke ị nwere ike iji wee rụọ ntanetị na ntanetị. Obi dị m ezigbo ụtọ n'ihi na nke a bụ 1 nzọ nso. M nwere olileanya na Yahoo “democratizes” Ọkpọkọ na-enye ohere ọzọ aka iru ha modul.
Abụghị m onye Java, n’agbanyeghi na m dere ụfọdụ. O yiri ka ha bụ ndị nkịtị dị jụụ ma a bịa n’ihe mmepe. Ka mmetụta nke Sun na-aga n'ihu na-eto, enwere m olileanya na Java na-eme nke ọma. .NET maa eickedomi ụfọdụ nke ike na m na-achọpụta ndị ọzọ nyiwe n'ịkpa Java ọzọ ngwa ngwa. Enwere m ike ịmekwu ihe omume ụlọ na Java. 🙂
Aga m elele Ihe ntinye. Daalụ!